Global Voices teny Malagasy » Siria: Fisaonana Ireo Tantsambo Nafoiny · Global Voices teny Malagasy » Print
Siria: Fisaonana Ireo Tantsambo Nafoiny
Voadika ny 16 Avrily 2018 16:40 GMT 1	 · Mpanoratra Yazan Badran Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Syria, Zeorzia, Mediam-bahoaka, Vaovao Mafana, Voina
Tamin'ity herinandron'ny 16/11/07 ity, voasasan'ny loko maintin'ny fisaonana ny sisintany Siriana, taorian’ireo vaovao mampihetsi-po  mikasika ny sambo Siriana “Haj Ismail” [mitondra saina Zeorziana, saingy an'ny ekipa Siriana sy nampiasainy manontolo] niharan'ny rivodoza mahery vaika izay nikapoka ny Ranomasina Mainty tamin'ny herinandro faharoa tamin'ny Novambra 2007, nahitana sambo sivy hafa ihany koa. Roa sisa velona tamin'ireo 17 iray tarika. Latsaky ny 33 taona avokoa ireo tantsambo rehetra.
Misaintsaina ny loza  i Abu Fares’ , A Tartoussi [avy ao Tartous , tanàna amorontsiraka Siriana], izay nahalala ny ankamaroan'ireo tantsambo ireo sy ny fianakaviany.
Kapoka miverimberina sy manimba izay iainanay isantaona io, mialoha ny tsy hidiran'i Tartous ao anatin'ny fandikana iray kidaladala iray ny fisaonana. Tsy misy endrika ho jerena, tsy misy taolan-kalevina, tsy misy fasana handohalehina hitomaniana. Manohy anaty toejavatra iray misavoamboana tsy misy fitsaharana mandrakizay ireo renim-pianakaviana, amin'ny fitazanana avy eny am-baravarankely, miandry antso an-tariby na taratasy mitondra hafatra mahagaga.
Nisarika fanehoankevitra sy vavaka niraradraraka ho an'ireo tantsambo maty ilay lahatsoratra feno fihetsehampo.
Mpaneho hevitra iray, Dubai Jazz , no nanontany, “Ka misy àry ve hirika azo hialàna amin'ireo loza ireo?”
Izao no valintenin ‘i Abu Fares':
Eny, hàlako ny manome valinteny raha mbola mivoa-drà ny fo. Kanefa, araka ny antontan'isa, ny isan'ireo sambo siriàna rendrika dia manamarina fa nisy zavatra tsy nety tao. Indrindra fa miatrika bebe kokoa ny loza mitatao ireo sambo miandriaka amin'ny ranomasina Mainty. Efa antitra ireo sambo ireo amin'ny ankapobeny, tsy misy fanamboarana na efa tsy tokony hiasa intsony. Tsy mahazo miantsona any amin'ireo seranantsambo eoropeana intsony izy ireo, ary Eoropa Andrefana no tiako ambara amin'io satria heverina fa mitondra loza izy ireo. Ny ankamaroan'ireo sambo dia tsy sambo natokana ho an'ny fivezivezena an-dranomasimbe, noho izany hitsahatra izy ireo rehefa avy nanompo fotoana ela, fa tsy toy ny mahazatra, na rendrika any anaty ranomasina tsy mivalo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/16/117949/
 ireo vaovao mampihetsi-po: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7090141.stm
 Misaintsaina ny loza: http://abufares.blogspot.com/2007/11/lost-at-sea.html
 Abu Fares’: http://abufares.blogspot.com/